Senegal oo noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya afar dhammaadka Koobka qarammada Afrika 2019… + SAWIRRO – Gool FM
Senegal oo noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya afar dhammaadka Koobka qarammada Afrika 2019… + SAWIRRO
(Qahira) 10 Luulyo 2019. Xulka qaranka Senegal ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya afar dhammaadka Koobka qarammada Afrika 2019 kaddib markii ay garaaceen Benin.
Kulanka oo ahaa kii ugu horreeyey ee laga ciyaaro kulamada siddeed dhammaadka tartankan ayaa ahaa mid adag, waxaana qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay xulka Senegal ayaa la yimid goolka hore waxaana u dhaliyey Sadio Mane, kastoo weeraryahanka kooxda Liverpool loo sheegay inuu goolkaasi ahaa garab dhaaf.
Markale ayey awood u yeesheen inay gool kale la yimaadaan waxaana 70’daqiiqo u dhaliyey Idrissa Gana Gueye oo ka tirsan kooxda Everton, kaddib caawin uu ka helay laacibka Liverpool ee Sadio Mane, sidaas ayaana lagu hoggaamiyey xulka Benin 1-0 ay iska kaashadeen wiilasha ka xamaasha Merseyside-ka.
Xaaladda ayaa ku sii xumaatay xulka Benin kaddib markii 82’daqiiqo ee kulankan uu kaarka casaanka ah ka qaatay ciyaaryahan Olivier Verdon, kaasoo garoonka laga saaray, waxaana kulanku ku soo dhammaaday 1-0 ay ku adkaadeen wiilasha Senegal.
Xulka Senegal ayaa sidaas isaga xaadiriyey afar dhammaadka koobka qarammada Afrika 2019, waana markii ugu horreysay oo ay gaaraan semi-finalka tartankan tan iyo sanadkii 2006.
Man United oo la ballansan Kooxaha Inter Milan, AC Milan iyo Tottenham kulammada Saaxiibtinnimo ee isu-diyaarinta xilli ciyaareedka cusub
RASMI: Divock Origi oo heshiis wakhti dheer qallinka ugu duugay kooxdiisa Liverpool